Sakura Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Sakura Spa | Kamayut
Sakura Spa သည် မေလ၊ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ဂမုန်းပွင့် (စံရိပ်ငြိမ်) ရှောပင်းစင်တာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။
ဆိုင်လေး ကို ခရမ်းရောင် လေးများဖြင့် လှလှပပ ဆေးချယ်ထားပြီး ဇိမ်ရှိစေသော ပရိပဘောဂ အသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြုထား သည့် အပြင် မွှေးပျံ့သော ရနံ့ လေးများကို လည်း ပက်ဖျန်းထား သောကြောင့် ဆိုင်ခန်း အတွင့်သို့ ဝင်ရောက် လာသူများအဖို့ စိတ်ကြည်နူး လန်းဆန်းသွား စေ မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Sakura Spa တွင် ရရှိနိုင်သော Services မျာမှာ Hair Salon, Facial and body Spa, Body Scrub, Body Massage, Foot Massage, Nail Treatment, Nail Art နဲ့ Waxing များကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဤဆိုင်လေးတွင် ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တစ်နေရာတည်း ဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဆိုင်တွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော အရည်သွေး ကောင်းမွန်သည့် အလှကုန်ပစ္စည်း များကို သာလျှင် သုံးထား သောကြောင့် အသားအရေတွက် အထူးပင်စိတ်ချရပါသည်။
ဆံပင်အတွက် ဆိုလျှင်လည်း ကျွမ်းကျင်သော ဂျပန်လူမျိုး ဆံပင်ပညာရှင်များလည်း ရှိသောကြောင့် သင့်အတွက် စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးပါသေးသည်။
ဒါ့အပြင် Customer Service မှာ အထူးပင် ကောင်းမွန်ပြီး ဝန်ထမ်းများမှာလည်း နွေးထွေးပျူငှာ သည့်အပြင် Customer Satisfaction ကို အထူးပင်အလေး ထားသောကြောင့် သင့်အတွက် စိတ်ချမ်းသာ ရရှိစေပါမည်။
ထို့ကြောင့် သင့်သည် ထိုဆိုင်လေးကို သွားမည် ဆိုပါက သင့်ရဲ့ အလှအပ အတွက် ပြည့်ဝသော ပျော်ရွှင်မှု နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှု ကိုရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Sakura Spa ကလည်း သင့်ရဲ့ အလှအပ အတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် စောင့်ကြိုနေပါသည်။
No. 96 N 108, 5th Floor, Gamonepwint Shopping Mall (Sanyeiknyien), Kamaryut Tsp.
ဆောရီး , အသေးစိတ် ဓါတ်ပုံများ တင်လို့ မရပါ
အကြံပြှောက်ကံခံည့် နေရှာာမျှာား
Dr.Somchai Counter Sanyeiknyein Gamonepwint Second Floor
Ga Mone Pwint (San Yeik Nyein) Beauty Corner Third Floor
Beauty Others, Cosmetic
Smart & Style Beauty Salon
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် / Terms & Condition